Dhaawaca Xannaano-maalmeedka | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Waqti kasta oo aad ku aaminto cunugaaga kormeerida xanaano-maalmeedka ama iskuul, waa caadi inaad adiga uun filan karto in cunuggaaga noqdo mid amaan ah oo aan fiicneyn inta uu / ay joogo xarunta.
Dhaawaca xannaano maalmeedka ayaa dhici kara wakhti kasta.
Shaqaalaha xanaano maalmeedka waxay u dhaqmi karaan si taxadar leh
Xannaano-maalmeedyadu waxaa laga sugayaa inay lahaadaan danaha ugu wanaagsan ee cunugga maanka ku haya si loo yareeyo khataraha soo food saari kara oo loola dhaqmi lahaa xaaladda sidii haddii carruurtu iyagu iyagu yihiin. Nasiib darrose, xaaladdu sidan ma aha had iyo goor.
Qareen ku takhasusay dhaawaca xannaano maalmeedka ayaa kaa caawin doona
Dhaawaca xannaano maalmeedka ayaa dhici kara wakhti kasta. Xannaano-maalmeedka ama shaqaalaha dugsiga iyo shaqaaluhuba si ficil leh ayey u dhaqmi karaan oo ay khaladaad sameyn karaan tanina badanaa waxay ku keenta dhaawacyo. Laakiin, ha dareemin caawimaad haddii ilmahaagu ku lug yeesho shil xanaano-maalmeed. Qareen ku takhasusay dhaawacyada xanaano maalmeedka ayaa kaa caawin doona inaad hesho magdhow xaq u leh dhaawacyada joogtada ah ee canuggaaga oo aad hubiso in isla dhibaatadaas mar dambe aysan dhici doonin.
Waxaa jira siyaabo badan oo loogu xadgudbi karo ama loo jebin karo heerka daryeelka. Shaqaaluhu waa ay noqon karaan kuwo taxaddar leh inta lagu jiro nashaadyada gudaha iyo gudaha. Xarumaha ama hawl wadeenadooda iyo milkiileyaashoodu sidoo kale waxay jabi karaan waajibaadkooda daryeel haddii ay ku guuldaraystaan ​​inay si sax ah u dayactiraan qalabka ciyaarta, aaladda musqulaha, iyo qalabka fasalka; waxay ku guul darreystaan ​​inay bixiyaan deegaan macquul ah iyo nadaafad; ama waxay u oggolaadaan carruurtu inay galaan sheyga dhejiska halista dhaawaca ah.
Xarumaha xanaano maalmeedka ee bixiya gaadiidku waxay sidoo kale noqon karaan kuwa dayaca marka ay kormeeraan kormeerayaasha darawalada, shaqaaleysiinta darawalada aan ku filneyn, ku guuldareysiga in si sax ah u dayactiraan iyo kormeeraan gawaarida, iyo ku guuldareysiga hubinta in caruurta si sax ah loogu xirayo oo fadhiyaan.
Tallaabooyinka taxaddar la'aanta ee Dhaawacyada Xannaanada
Haddii ilmahaagu uu dhaawac ka soo gaadho xannaanada ama iskuul sababta oo ah shaqaalaha dayaca, waxaad ku imaan kartaa talaabo dayac ah si ay kaaga caawiso soo kabashada dhaawacyada joogtada ah ee canuggaaga. Haddii jawiga xarunta si taxaddar la'aan ah loogu talagalay ama loo habeeyay qaab khatar u keeni kara carruurta, milkiilaha xarunta ama qofka loo kireeyay milkiilaha si uu u dejiyo xarunta waxaa waajib ku ah in laga taxadiro ficil la'aanta ka dhasha dhaawaca soo gaara ilmaha. .
Fahmitaanka Xeerarka Ku xadgudubka Caruurta iyo Dayaca
Haddii cunuggaagu dhaawacmo inta uu kormeerayo daryeelaha, xarunta xanaano-maalmeedka, ama qof kale oo mas'uul ka ah daryeelahooda, waxaad u fayl garayn kartaa dacwad kormeerid dayac. Xaaladaha noocaas ah, qofka aqbalay mas'uuliyadda cunuggaaga laakiin u hawl gala si taxaddar la'aan ama taxaddar la'aan ah ayaa loo dacweyn karaa dayacaad.
Waxaad u baahan tahay caddeyn in ururka ama shaqsigu aqbalay mas'uuliyadda xannaaneynta cunuggaaga si loo caddeeyo kiis kormeerid dayac. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad caddeyso daryeel bixiyaha inuu ku guuldareystay inuu si sax ah ula socdo cunuggaaga. Waa inaad caddeysaa in dhaawaca canuggaaga uu ahaa mid laga hortagi karo oo la arki karo iyo ku guuldareysiga kormeeraha inuu si sax ah ula socdo cunuggaaga wuxuu sababay dhaawac.
Waxa jira kiisas xad-dhaaf ah oo ku saabsan xadgudubka carruurta inta ay ku hoos jiraan daryeelka xisbiga masuulka ka ah oo ay ku jiraan haraati iyo garaacis. Kuwani waa kiisas naxdin leh oo naxdin leh carruurta iyo waalidiinta labadaba waana muhiim in si cadaalad ah loogu raaco maxkamadda sharciga si loo ciqaabo khasaaraha.
La xiriir Qareenka Dhaawaca Ilmaha
La xiriir qareenka dhaawaca ilmaha isla markaaba si aad u hesho dadaal, dagaal, iyo wakiilnimo khibrad leh oo u dagaallami doona adiga iyo xuquuqda ilmahaaga oo aad heli doontid magdhow buuxa.
taxaddar la'aan xarunta daryeelka ilmaha
Qareenadayada ayaa leh wax kabadan 35 sano oo khibrad ah oo ku saabsan kiisaska dayacaad xanaano maalmeed waxayna halkan u joogaan inay caawiyaan.